थुनिएको योगी–दर्शन- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
माघ १२, २०७५ दामोदर न्यौपाने
काठमाडौँ — योगी नरहरिनाथको निधन भएपछि आश्रमको स्वामित्व र उत्तराधिकारीबारे विवाद उब्जियो ।
लगत्तै गुठी संस्थानले आश्रममा ताला लगाइदिएपछि योगीको जीवन दर्शन, ज्ञान र योगदानमै तालामारेजत्तिकै भयो । तालाबन्दी आश्रमभित्र तीन ट्रक जति किताब मात्रै सडेको ढिलो गरी थाहा भयो ।
२०७२ चैत १५ गते काठमाडौंमा ठूलै हुरी चल्यो । दिउसो ४ बजे आएको हुरीले मृगस्थलीमा रहेको योगी नरहरिनाथ आश्रमको छानो उडाइदियो । त्यो हुरीबतास आएर राम्रै भयो । किनभने हुरीले छाना नउडाएको भए आश्रमभित्र छिर्नै सकिंदैनथ्यो । गुठी संस्थानले आश्रममा लगाएको ताला खुल्ने छाँटै थिएन । ‘हुरीले टिनको छानो उप्काएपछि बल्ल भित्र छिर्न पाइयो,’ पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता चिन्तामणि योगीले सुनाए, ‘अनि मात्रै आश्रमभित्र रहेका सामानको विजोग अवस्था थाहा पाइयो ।’
योगी नरहरिनाथ २०५९ फागुन १३ ब्रह्मलिन भएपछि आश्रमको स्वामित्व र उत्तराधिकारीबारे अनाहकमा विवाद उब्जियो । त्यसपछि लगातार १३ वर्षसम्म गुठीले आश्रममा ताला लगाइदियो । ‘आश्रमको हेरचाह नभएपछि तीन ट्रक जति किताब मात्रै सडेछन्,’ योगीका वैचारिक योगदानबारे बहस चलाइरेको बृहत् आध्यात्मिक परिषद्का महासचिव विश्व पोखरेल भन्छन्, ‘बाँकी रहेका पुस्तक र योगीले प्रयोग गरेका केही सामान अहिले व्यवस्थापन गरेका छौं ।’
दाहसंस्कार गर्ने बेलामा उत्तराधिकारी चाहिने रहेछ । तत्काल जटिलता आउन नदिन चिन्तामणि योगीलाई समाधि व्यवस्थापन समितिको संयोजक तोकियो । ‘समाधि गर्ने बेलामा अर्काे समस्या आउला भनेर म संयोजक बनें, ‘योगीले सुनाए, ‘तर, काजकिरियापछि गुरुको आश्रममा अकारण ताला लागिरह्यो ।’
ताल्चा खोलेर योगीका अप्रकाशित ग्रन्थ संरक्षण/प्रवद्र्धन गर्ने र प्रकाशित गर्ने अनुमति माग्यो परिषद्ले । तर, गुठी संस्थानले अनुमित दिएन । ‘आलटाल गरिरह्यो, जालझेल चलिरह्यो,’ पोख्रेल भन्छन्, ‘कहिले आधिकारिताको प्रमाणपत्र मागियो, कहिले पशुपति गुठीको सिफारिस मागियो ।’
‘गुरुकी सेविका हुँ’ भन्दै तिमिला श्रेष्ठ त्यहींको अखडामा बसिन् । अखडामा सेविका बसिरहे पनि नरहरिका सामान जोगिएनन् । ताला लागेकै ठाउँमा पनि दर्जनौं पाण्डुलिपि चोरी भए । निकैपछि थाहा भयो, नरहरिले योगी श्रीषनाथलाई उत्तराधिकारी तोकेका रहेछन् । ‘उहाँले त्यतिबेला प्रमाण पेस गर्नुभएन, योगी भन्छन्, ‘धेरै पछि मात्रै थाहा भयो ।’
त्यही २०७२ को हुरीबतासले धेरै परिवर्तन गरिदियो, मृगस्थली डाँडामा रहेको गोरखनाथ क्षेत्रमा । त्यही वर्षदेखि योगीले लेखेर उत्तराधिकारी तोकेका श्रीषनाथले पनि गोरखनाथको मठाधीश पद सम्हाले ।
गोरक्ष दर्शनमा सामान्यतया अखडा र दर्शन गरी दुई पक्ष हुन्छन् । नरहरिको देहावसानपछि पनि यहाँको अखडा सञ्चालन भयो । अखडामा आएर जोगी बसे । गोरखनाथ पीठमा नित्य पूजा व्यवस्था भए । ‘पूजा परम्परा रोकिएन । तर, विचार पक्ष ओझेल पर्दै गयो,’ योगी भन्छन्, ‘सबैभन्दा घाटा लाग्ने कुरा आश्रमभित्र भयो, योगीका अमूल्य पुस्तक सडेर सकिए ।’
वैचारिक पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन परिषद्ले प्रयास थालेको छ । २०७२ सालमै त्यहाँका किताबलगायत योगीका सामानसमेत संग्रह गरेर ‘योगी नरहरि स्मृति पुस्तकालय तथा संग्रहालय’ स्थापना गरियो । मृगस्थलीबाट गुहेश्वरी जाने बाटोको बायातिर पर्छ— गोरखनाथ अखडा । अखडाको छेउमै छ नरहरिनाथको समाधिस्थल । समाधिस्थलमाथि राखिएको छ उनको अर्धकदको सालिक । अखडाको छेउमै गोरखनाथ पीठ पर्छ । त्यही पीठको दायातिर एउटा लामो सत्तल थियो । जीर्ण अवस्थाको त्यो सत्तललाई महासचिव पोख्रेलले आफ्नै खर्चमा मर्मत गरे । त्यसलाई चिटिक्क बनाएर माथिल्लो तलामा खोले पुस्तकालय र संग्रहालय । ‘मैले व्यक्तिगत रूपमा ८ लाख खर्च गरेको छु,’ नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय सेवा गरेका पोख्रेलले भने, ‘खास पढ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ । देशबारे लेखिएका किताब छन् यहाँ । योगीको दर्शन सबैले बुझून्, चासो राखून् भन्ने मेरो चाहना छ ।’
पुस्तकालय चलाउन सजिलो नभएको पोख्रेल बताउँछन् । स्थानीय दर्शनधारी समूहले अवरोध गर्ने गरेको गुनासो उनले गरे । ‘हामीले पुस्तकालय संग्रहालय व्यवस्थापन गर्न स्वयंसेवीसहित ४ कर्मचारी राखेका थियौं,’ पोख्रेलले गुनासो गरे, ‘ती कर्मचारीलाई यहाँ बस्नै दिएनन् । दर्शनधारी समूह योगीको सम्पत्ति योगीले पाउनुपर्छ जस्तो गर्छन् । हामीचाहिं योगीको सम्पत्ति समाजको हो भन्छौं ।’
योगीले ५ सय ७१ वटा पुस्तक लेखेको तथ्यांक परिषद्सँग छ । त्यसमध्ये १ सय ७६ छापिन बाँकी छन् । ती पाण्डुलिपि प्रकाशन गर्ने योजना रहेको उनले बताए । २००३ सालबाट पुस्तक प्रकाशन गर्न सुरु गरे योगीले । २००७ सालमा उनकै संयोजकत्वमा योग प्रचारिणी महासभा गठन भयो— भारतको हरिद्वारमा । यो संस्था गठन भएपछि ‘गोरक्ष ग्रन्थमाला’ नाममा योगीले पुस्तक प्रकाशन गरे । उनका १ सय २८ पुस्तक गोरक्ष ग्रन्थमालाको नाममा छापिएको पोख्रेलले जानकारी दिए । उनका पुस्तकमध्ये मृगस्थलीको पुस्तकालय तथा संग्रहालयमा ३ सय ५९ वटा संगृहीत छन् । योगीले इतिहास, पुरातत्त्व, संस्कृति, आयुर्वेद, साहित्यजस्ता विधामा कलम चलाएका छन् । उनी आफैं २८ भाषाका ज्ञाता थिए । नेपाली, हिन्दी, थारूदेखि भारतको तेलगु भाषामा समेत दख्खल थियो उनको ।
कालिकोटको ठाँटिकोटमा विसं १९७१ मा जन्मिएका हुन् नरहरि । ललितसिंह थापा र गौरदेवीका माइला सन्तान नरहरि १९९१ मा संन्यासी भएका थिए । ८ वर्षको उमेरमा व्रतबन्ध गरेपछि वलवीरसिंह थापा योगी नरहरिनाथ भएका थिए । जुम्ला चन्दननाथ मन्दिरका महन्थ छिप्रानाथ योगीको चेला थिए योगी । उनले त्यहींको भाषा पाठशालामा प्रारम्भिक शिक्षा लिएका थिए नरहरिले । भारतमा उच्च शिक्षा सकेपछि गौहत्या निषेध आन्दोलन र भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा समेत होमिएका थिए । भारत स्वतन्त्र भएपछि उनलाई भारतले स्वतन्त्रता सेनानी उपाधिसहित जीवनवृत्ति दिन चाहेको थियो । त्यसलाई अस्वीकार गरेर उनी देश फर्किएका थिए । योगीले संवत् २००४ सालदेखि स्थायी रूपमा मृगस्थलीमा बसोबास गरेका थिए । जुद्धशमशेरले मृगस्थलीमा चार रोपनी जमिन दिएर दुईवटा अखडा र गौशालासमेत बनाइदिएका थिए । उनी २००४ देखि २०१८ सम्म गोरखनाथ पीठको महन्थ भए । आफू देश दौडाहामा निस्कने भएकाले त्यो पद आफ्ना गुरु छिप्रानाथ योगीलाई सुम्पिएका थिए । छिप्रानाथको २०४४ सालमा निधन भएपछि टीकानाथ योगी, रूपनाथ योगी हुँदै अहिले योगी श्रीषनाथमा यो जिम्मेवारी आएको छ ।
नरहरिलाई राष्ट्रिय गुरु, शास्त्री, वेलविद्यालंकार, आशुकवि, धर्मशास्त्राचार्य, पुरातत्त्वविद्, इतिहास लेखक, गोभक्त, आजीवन योगाभ्यासी, आवाल ब्रह्मचारी, शतसहस्र तीर्थयात्री, वनस्पति परिचयज्ञ, सहस्राधिक पुस्तक लेखकजस्ता विशेष दिइएको थियो । २०४९ सालमा छापिएको ‘शिखरिणी’ उनको चर्चित कृति हो । कोटिहोम गर्दै नरहरिनाथ देश घुमेका थिए । कोटिहोमबाट उठेको दक्षिणाले देश विदेशमा गुरुकुल स्थापना गरेका थिए । २०३८ सालमा तनहुँको गलेश्वर आश्रमबाट सुरु भएको थियो कोटिहोम । त्यसपछि उनले १ सय २९ ठाउमा कोटिहोम, ४५ लक्ष्यहोम र ५ वटा शिवयज्ञ सम्पन्न गरेका थिए । ‘कोटिहोम र यज्ञको माध्यमले योगीले सनातन दर्शन, वेद, गायत्री, संस्कृति भाषा र गाईबारे समाजलाई शिक्षित बनाए,’ पोख्रेल भन्छन्, ‘वैदिक दर्शनमा क्रान्तिको सुरुआत गरे । वेद र उपनिषद्को उपदेशलाई सरल र सहज शैलीमा अथ्र्याए । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु र प्रकृतिको संरक्षणको महत्त्व उजागर गरे । संस्कृत भाषा नै अन्य भाषाको जननी भएकाले यसको संरक्षण गर्न जोड दिए ।’
संस्कृति शिक्षाको महत्त्वलाई जोड दिंदै दाङमा नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पहल गरे । भारतको गिरिजापुरीमा पनि संस्कृत विश्वविद्यालय खोल्न पहल गरेका थिए । त्यसबाहेक थुप्रै संस्कृत पाठशाला र विद्यापीठ खोल्न पहल गरेका थिए । २००८ सालमा दाङमा जनता महाविद्यालय खोल्न पहल गरेका थिए । त्यो उनको पहलमा खुलेको पहिलो विद्यालय थियो । त्यसयता नेपालगन्ज, धरानको विजयपुर, गोरखाको ठिंगुरेश्वाँरा, अछाम, ललितपुरलगायत १३ ठाउँमा विद्यालय खोल्नपहल गरेको परिषद्ले जनाएको छ ।
नरहरिनाथलाई ‘राजावादी’ भनेर आरोप लगाए पनि राजाकै पालामा उनलाई सबैभन्दा बढी दु:ख दिइएको थियो । २०१७ सालमा प्रहरी लगाएर उनको सम्पत्ति नष्ट गराइएको थियो । २०३३ सालमा उनी ६ महिना जेल बस्नुपर्‍यो । राजालाई लक्षित गरेर उनले ‘छाता ओढ्न सक्नेले छाता बोक्न पनि सक्नुपर्छ’ भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिले उनलाई जेलको यात्रा गरायो ।
उनको लामो समय संगत गरेका चिन्तामणि योगी ‘अद्भुत व्यक्ति’ मान्छन् नरहरिलाई । त्यही अद्भुत गुणले गर्दा नरहरिसँग जो पायो, त्यहीको सम्बन्ध लामो समय टिक्न सक्दैनथ्यो । ‘उहाँको काम गर्ने गति र शैली भिन्न थियो । उहाँलाई काम नसकुन्जेल खानै नपर्ने थियो । गन्तव्यमा नपुगुन्जेल उहाँ कहींकतै बस्नुहुन्नथ्यो,’ योगी भन्छन् ।
नरहरिले शिष्य परम्परा र भक्त परम्परा नबनाएको योगी बताउँछन् । त्यही भएर उनको अमूल्य सम्पत्ति स्याहार्ने कोही भएनन् । ‘अब उनको दर्शनको खोजी राज्यले गर्नुपर्छ,’ योगी भन्छन्, ‘योगीले देशका लागि जति गरे, अद्भुत काम गरे । यो सम्बन्धित निकायले अझै बुझेको छैन ।’
प्रकाशित : माघ १२, २०७५ १०:०७
यो दोस्ती, त्यो दोस्ती
शवमा चढाउने फूल कि खील निकाल्ने काँडा ? देशले मनाइरहेको गणतन्त्र दिवस कि आत्महत्या गरिरहेका कृषकहरूको दुर्भाग्य ?
माघ १२, २०७५ मनोज बोगटी
काठमाडौँ — अहिले उसको छनोट चेस हो । भोलि त्यो नरहन पनि सक्छ । अचानक उसलाई गाउन मन पर्देला ।
बजाउन मन पर्देला । नाच्न मन पर्देला । यद्धपि, ऊ आफूयोग्य केही न केही खोजिरहेकै छ । यति भए एउटा बाबालाई अरू के चाहियो र ।
आरोहण, १४ मा हिँड्दै छ । हाम्रो यो दोस्ती, बाबाछोरा कम र साथीसाथी धेर छ । तर्क गर्नु, जित्नु र रमाउनु उसको कोसिसहरूमध्ये प्रमुख हो । बेलाबेला उसलाई जित्न दिनु, नदिनुबारे म दोधारमा परिरहन्छु नै । मनोवैज्ञानिक रूपले उसमा पर्न सक्ने असर– प्रभावहरूबारे सचेत रहन्छु । यस्तो बेला मलाई फ्रायडले पनि साथ दिन्छ ।कराँतेमा ब्राउन बेल्ट (सेकेन्ड) सम्म पुग्यो ।
घरका भित्तामा उसकी आमाले विभिन्न ठाउँमा मलाई सम्मान गर्दा दिइएका प्रशस्तिपत्रका फ्रेमहरू झुन्डाएकी छन् । भित्ताभरि फ्रेम नै फ्रेम देखेपछि ऊ भन्थ्यो, ‘बाबा भित्तैभरि तपाईंको सम्मानपत्र छ, अब मेरो नामको फ्रेम पनि एउटा भित्तामा लाग्छ है ।’
मलाई थाहा छ, उसको पहिलो प्रतिद्वन्द्वी म नै हुँ । लड्न त ऊ अरूसित नै लड्ला तर जब उसको दिमागमा घरको भित्ता आउँछ, पहिलो ईष्र्याको घुस्सी मप्रति नै हो । सिग्मन फ्रायडले १८९७ देखि आफैंलाई पढे । बुझ्दै जाँदा मानिसभित्रको ‘इडिपस वृत्ति’ चाल पाए ।
फ्रायडलाई पनि आफ्नो बाबाप्रति उस्तै ईष्र्या हुने । संसारमा अहिलेसम्म उनको ‘इडिपस ग्रन्थि’ बाट मनोसंसारलाई हेरिन्छ । त्यो ग्रन्थि आरोहणभित्र नहुने कुरा आयो र ? मलाई थाहा छ, त्यो ग्रन्थिले आरोहणभित्र टाउको उठाउँदै छ । समान लिंग हुनेहरूबीच शत्रुता, होड र वैमनस्य स्वाभाविक भइगयो । फ्रायडले त मान्छेका सपना, संस्कृति र मिथकमा पनि इडिपस वृत्तिले काम गर्ने बताइसकेकै छन् ।
एक दिन दिल्लीमा भएको राष्ट्रिय कराँते प्रतियोगितामा ब्रन्च जित्यो । र, पाएको प्रमाणपत्रको फ्रेम एउटा भित्तामा राख्यो । एक दिन गुवाहाटीमा भएको राष्ट्रिय कराँते प्रतियोगितामा मेडल जितेन तर पाएको प्रमाणपत्रको फ्रेम अर्को फ्रेमको केही पर्तिर राख्यो । उसकै प्रमाणपत्रका फ्रेमहरू राख्नलाई मैले मेरा केही प्रशस्तिपत्रहरू भित्ताबाट हटाइदिएँ ।
मलाई उसको आफ्नो बाबाप्रतिको त्यो ईष्र्यासित प्रेम जो थियो ।मलाई उसको खुसीले आनन्द दिइरहेकै थियो । फ्रायडको आनन्दको सिद्धान्तले भनेजस्तै मेरो आनन्द पनि छिट्टै दु:खमा बद्लियो ।ब्ल्याक बेल्ट पुग्ने बेला ऊ क्लास जानै छोडिदियो । एक दिन मैले केरें ।
‘कराँते त मैले मनले चाहेको खेल होइन रहेछ,’ ऊ भन्छ, ‘मैले चाहेको के हो के हो म त सधैं दोधारमा हुन्छु, कन्फ्युज हुन्छु ।’मैले कराँतेबाट उसलाई लिएर देखेको सपना, यति संवादले नै भताभुंग भयो । आरोहणले मलाई दु:ख दियो । यतिखेर स्याडिज्मले यो मेरो दु:खलाई कसरी व्यक्त गर्छ, थाहा छैन ।
तर, मलाई उसको सकसले बिझाउँछ । उसको छटपटीले सताउँछ । सम्झन्छु, मै पनि त धेरैपल्ट दोधारमा परेको छु । दोधारमा परेपछि कसको के लाग्यो र ? तर मैले त दोधारमा नपरेकै बेला पनि बाँसको भाटा भेटेको छु ।
हो, बाँसको भाटा, त्यो पनि क्लास फोर पढ्दै गरेको कलिलो ढाँडमा ।
त्यसको कथा फेदमा भन्छु है त ।
म आरोहणलाई सम्झाउने कोसिस गर्छु । दोधारमा पर्नु अल्झिनु नै चाहिं होइन । तर, ऊ थोरै बुझ्छ । मचाहिं धेरै बुझाउँछु ।
मलाई सधैं लाग्छ, वास्तवमा दोधारमा पर्नेहरूले नै आफ्नो बाटो भेटाउने हो । संसार नै त छान्नुको संकटमा अल्झिएको छ । संसार नै त दोधारमा छ ।
तपाईंले भारततिर फर्किएर हेर्नु भो भने देख्नुहुन्छ, एकातिर कट्टर हिन्दु राष्ट्रवाद, अर्कोतिर गणतान्त्रिक असहिष्णुता । राजनीतिले हिन्दु–मुस्लिम, हिन्दु–मुस्लिम खेल खेलिरहेकै छ ।
यता अल्पसंख्यकहरूको असुरक्षा र उता बजारको आतंकी उदारवाद । यता किसानहरू ऋण बोकिरहेका छन्, उता कर्पोरेट्सहरू ऋण बोकाइरहेका छन् । अचेल आमाले कुनै पनि बीउ (गेडागुडी) भारमा राख्दिनन् । कम्पनीहरू उन्नत बीउबिजन बोकेर बारीमै आइपुग्छन् । माल्दाजुहरू मल बोक्दैनन्, कम्पनीहरू प्याकेटप्याकेट रसायन बोकेरखेतैमा पसिदिन्छन् ।
हल गोरुहरू बारीबाट निस्किसके । सरकार भन्छ, ‘ट्याक्टर चलाऊ, गोरु त गौ माताको लोग्ने हो । यसको त पूजा पो गर्नुपर्छ, मासु खाने हो र ?’ दार्जिलिङे पहाडका केही फोक्टा बारी जोत्नु कहाँबाट ल्याउनु ट्याक्टर ?
टीभीले गोरुको मासु खाने र गोरुको पूजा गर्नेको मारकाट देखाइदिन्छ । कुनै निश्चित एउटा कुरा देखाएको कहाँ छ ? टीभीहरू सबै दोधारमा छन् ।
देशका बौद्धिकहरूको विश्लेषण छ, देश भनेको अवधारणा हो । त्यो अवधारणामा कुनै एक धर्मले अर्को धर्मलाई कसरी निषेध गर्न सक्छ ? समावेशी आचरण किन गुमाउँदै छ लोकतन्त्रले ? राष्ट्रियताको माने किन संकुचित ?
संघीयताको मूल्यलाई इन्टेलेजेन्सियाहरूले हरेक सत्ताको फाइदाका लागि परिभाषित गरिसक्यो । हो कि होइन भनेर विचार गर्न छोडिसक्यो समाजले ।
भीएस नयपालले भनेको देश दुईवटै छ देशमा । एउटा एसीभित्र, एउटा एसीबाहिर । गायत्री चक्रवर्ती स्पिभाकले भनेको दुईवटा समाज छ समाजमा, एउटा हाटमा, एउटा मलमा । रोमिला थापरले भनेको दुईवटा गणतन्त्र छ गणतन्त्रमा एउटा संविधानमा एउटा सदनमा । देशले कुन छान्नु ?
मलाई आरोहण कन्फ्युज हुनु स्वाभाविकपनि लाग्छ ।
उसको देशमा जुन गणतन्त्र राजनीतिक दलको परिभाषाबाट चल्छ, कर्पोरेट्सको परिभाषाबाट चल्छ, त्यहाँ आरोहणलाई कन्फ्युज हुने गणतन्त्र हुँदैन त ?
मानिसहरू आफैं केही छान्नै सक्दैनन् । न फूल, न काँडा । न हर्ष, न दु:ख । न सपना न विपना । न जीवन, न मृत्यु । दुवैको मूल्यबारे उत्तिकै विश्वासयोग्य विज्ञापन छ बजारमा । कुन ठीक ?
प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरिरहेको डिजिटल इन्डिया कि विदेश पलायन भइरहेका युवाहरूको कुरूप विपना ? मोदीले फर्काउने वाचा गरेको कालो धन कि मालिकले ताला ठोकेर हिँडेको चियाबगान ? कुन छान्नु ?
कुन निर्णय ठीक, कुन बेठीक, ठीकठीक बुझ्न सकिन्न । नितान्तै कठिन छ, देशको पीडा बुझ्नु । जीवनको संकट बुझ्नु । समयको कठिनता बुझ्नु । सामाजिकता, राष्ट्रियता, धर्म, राजनीति, इतिहास सबैसबै त दोधारमा नै निर्माण भइरहेको छ । अब पुरानो भाष्यले आजबारे ठीकठीक केही बताउन सक्दैन । नयाँ भाष्य निर्माणमा लाग्नेहरू छन् पो कति र ?
तपाईंको आँखैअघि छ, (नरेन्द्र मोदीहरूको हिन्दु–मुस्लिम कूटनीतिक शास्त्र बन्दुकको नोकबाट बाहिरिएदेखियता कति बौद्धिकहरूलाई श्मशानघाट पुर्‍याइसक्यो । बन्दुकको गोली नै सर्वोच्च न्यायालय बनिसक्यो । दलित, अल्पसंख्यक र आदिवासीहरूको छाला उधारेर जियोको नेटवर्क र सिम बनाइसक्यो । धारा सुक्यो । सुर्ता किन गर्नु बिस्लेरीको जमानामा ?
हरेक तिर्खाको सभ्यता चुलियो । कुन दाम र कम्पनीको तिर्खा अंगीकरण गर्ने ? आँसु कमोडिटी बनेको जमानामा, दु:ख र गरिबीले पाउने मार्केट भेल्युबारे सदनमा लामालामा बहसहरू चलिरहनु आजको समयको सौन्दर्य हो ।
किनार परेकाहरूका लागि यो देशले के दिइरहेको छ ? यो प्रश्न भुत्ते बनिसक्यो । देशको हेडलाइन अगणतान्त्रिक सहिष्णुता हो कि गणतान्त्रिक असहिष्णुता ? आमाको पोल्टामा अझ पुरानै नोट छन् । यद्धपि, मोदीलाई सबैले त सोधिरहेकै छन्, ‘के कालो धन फर्कियो त ?’
प्रश्न गर्नेदेखि उत्तर दिनेसम्म दोधारमा नै छन् । कुनै पनि परिवर्तनअघि सायद दोधारमा आउनु अनिवार्य छ । देशका बौद्धिकहरू दोधार समय संक्रमणलाई भरपूर व्याख्या गरिरहेका छन् । सोधिरहेका छन्, ‘आउँछ त अच्छे दिन ?’
यद्यपि, यही प्रश्न पनि दोधारमा परिरहेको देशको मुक्तिको बाटो होइन ।
दोधार पनि कस्तो भने विदेशमा भाँडा माझ्न उडेका जवानहरूको जीवन उनीहरूले चुनेको जीवन हो कि श्मशानघाट ? आत्महत्या गरिरहेको कृषकले मर्ने बेला भुकुल्ले छोरो सम्झिएलान् कि ऋण ?
किसानहरूलाई गलामा पासो लगाउनअघि लाग्थ्यो, भाजपा सरकार उनीहरूको मित्र हुन् । तर, उनीहरूलाई थाहा थिएन गलामा लाग्ने दोरी केन्द्र सरकारले नै गाउँ पठाएको हो । मौसम बिग्रिएर खेती नहुनु त एउटा कुरा, मौसम नबिग्री भएको खेतीको बजार नै पनि नभेट्नु कति गाह्रो कुरा ? देशको अर्थनीति नै दोधारमा छैन त ?
अनि आरोहण दोधारमा नहुनु त ? अब कसैलाई पनि दोधारमा नबसी धरै छैन । न म, न आरोहण ।
तर, साँच्चि नै अघि बढ्नअघि सबैलाई दोधारमा पर्नु अनिवार्य त छ नै ।
आरोहणलाई पनि म यही भन्दै आइरहेको छु, कि दोधारमा पर्नु, निर्णय गर्न खोज्नु हो । सोच्ने अभ्यासलाई जारी राख्नु हो । विचार गर्ने अभ्यास हो । धेरै मानिस दोधारमा नै पर्दैनन् । थाहा छैन, उनीहरू कसरी मानिस भइराख्न सक्छन् समाजमा ।
दोधारदोधारको बाटोबाट सबै एक न एक दिन सही निर्णयमा पुग्लान । दोधारमा नै नपरी त कसरी निर्णयमा पनि पुग्नु र होइन ?
जस्तो, म आफैंलाई गाडीको ‘खलासी’ हुन्छु लाग्थ्यो । पछि त्यो निर्णय ठीक लागेन । किन भने पछिपछि गाडीको खलासीभन्दा ड्राइभर नैठूलो लाग्यो ।
मलाई ड्राइभर हुन्छुजस्तो लाग्थ्यो । त्यो पनि सही लागेन । ड्राइभरभन्दा त मालिक नै ठूलो होजस्तो लाग्यो । ड्राइभरभन्दा त गाडीको मालिक हुन्छुजस्तो लाग्यो । तर, म तिनोटै भइनँ ।
मेरो प्राथमिकता र ज्ञान दुइटै बढ्दै गयो । मलाई के–के न हुन्छुजस्तो लागेको थियो । तर, म केही हुन सकिनँ ।
बरु नसोचेको भएँ पत्रकार । नसोचेकै भएँ कवि । यति भइसकेपछि अहिले म दोधारमा छैन । दोधारबाट मुक्त बन्न मैले कति वर्ष गलाएँ त ?
कराँते अब आरोहणको दिमागबाट निस्कियो । फुटबलका लागि बेलाबेला ऊ मैदान पस्छ । ब्याट बोकेर ऊ सचिन तेन्दुलकरको नकल पनि गरिबस्छ । र्‍याकेट कोर्ट पनि धाउँछ । अहिले कोही मान्छे भेट्यो कि सोधिहाल्छ, ‘तपाईंलाई चेस खेल्न आउँछ ?
मलाई थाहा छ, कहिलेदेखि उसले यसरी सोध्न पनि छाड्नेछ । र, फेरि ऊ दोधारमा पर्नेछ । संसारका सबै बाबाहरूले आरोहणहरूलाई यसरी दोधारमा पर्न दिनैपर्छ । कमसेकम ‘म दोधारमा छु’ भन्न ज्ञान आएकाहरू भेटियो भने त सबै बाबाहरू रमाउनु पो पर्छ ।
किनभने एक दिन त उनीहरू दोधारबाट निस्किने नै छन् । कि कसो ?
‘यसपालि चैं फस्ट, सेकेन्ड या थर्डसम्म त आउँछु,’ आरोहणले भन्यो, ‘आएँ भने चेसबोर्ड किन्दिनुस् नि ।’
मलाई पत्यार लागेन ।
‘पत्याउने कुरा गर न, जहिल्यै दोधारे कुरा गर्छौ । कि फस्ट बन, कि सेकेन्ड बन कि थर्ड’ मैले भने, ‘पहिला पनि यसै भनेको तर पोर्थ आयौ ।’
तर, यसपल्ट उसले वचन पूरा गर्‍यो ।
काठमाडौंको एउटा सुपर मार्केटमा मैले उसलाई चेसबोर्ड किनिदिएँ, काठको ।
बल्ल ऊ आठ क्लासमा पुग्यो ।
‘थर्ड भएछौ । ठीक छ । तिम्रो ढाडमा भाटा नभाँचिने भयो, म खुसी छु,’ मैले आरोहणलाई भने ।
ऊ कुरा बुझेर हाँस्यो ।
‘चेसबोर्डका लागि थ्यांक्स बाबा,’ ऊ खुसी बन्यो । यस्तो, हामी बाबाछोराको यो दोस्ती सम्झिन्छु । त्यसपछि म बाबा सम्झिन्छु ।
बिहानै मलाई नयाँ र रातो रङको बीसको नोट देखाएर बाबाले भन्नुभयो, ‘फस्ट भइस् भने दिन्छु ।’ जीवनमा पहिलोपल्ट बाबाले दिएको आश्वासनलाई निकै गम्भीर रूपमा लिएँ हुँला । स्कुल पुग्दा र फलाफल थाप्दासमेत म दोधारमा थिएँ ।
के देलान् त मलाई बीसको नोट ?
त्यो चौथो श्रेणीको अर्धवार्षिक परीक्षाको फलाफलको कुरा हो । यसै त बाबाले मलाई कहिल्यै सम्झनलायक केही दिएको थाहा छैन । सिस्नुपानी, ट्वाक्सिङ, लात र झापट अनेकौं याद छ । र, याद छ, त्यो बीसको नोट ।
म न त बाबाको औंली समातेर स्कुल गएँ । न त बाबाले कुनै दिन खाता किताब नै किनिदिए । पेन्सिल हरायो कि रित्तिने त आमाको पोल्टो नै हो । तर, पेन्सिल हराउँदा मेरो गालामा बज्ने झापटचाहिं किन बाबाको ? बाबा र मबीच यस्तै कन्ट्रयास दोस्ती बस्यो ।
थाहा छैन, त्यो दिन बाबालाई के मुड आयो । गोजीबाट रातो बीस नोट निकाले । परीक्षा दिँदासम्म पनि बाबाले कुनै हरियो, पहेंलो नोट दिएनन् । फलाफलको दिन नै चाहिं किन देखाउनुपरेको बीसको नोट ?
हातमा परीक्षाफल बोकेर म घर पुग्दा बाबा साथीहरूसित आँगनमा बसेर रक्सी पिइरहेका थिए । त्यो दिन बारी छेउको मैनाको रूख ढाल्नु थियो । सायद बाबालाई मक्किएको घरको याद आएको थियो । मैनाको काठले घर बार्नु थियो । तर, उनीहरू मैनाको फेद पुगेकै थिएनन् । रूख ढाल्ने बहानामा भेला भएका उनका साथीहरू पनि बाबासितै बसेर रक्सी पिइरहेका थिए । उनीहरूलाई रक्सीले भुल्याइरहेको थियो ।
म हातमा परीक्षाफल बोकेर आँगन पुगें । बाबाले परीक्षाफल खोसे । पढेजस्तो गरेर हेरे । मेरो एउटा पाखुरामा दह्रो गरी समाते र सोधे, ‘के भइस् ?’
म बोलिनँ ।
परीक्षाफल छेउमा बसेर रमिता हेरिरहेका नरेश काकाले ताने । बाबा फेरि कड्किए, ‘केभइस् भनेको ?’
म तर्सिएँ । तर, म बोल्न सकिनँ । मलाई असाध्यै डर लागिसकेको थियो । उनले पनि परीक्षाफल हेरेकै हुन्, के भएँ हुँला त ? तर, मेरो बाबाले आफ्नो परीक्षाफल कहिल्यै हेरेकै थिएनन् । ढुंगे क्लासबाट सधैंका लागि घर भागेका बाबा फेरि स्कुल नै त गएनन् । उनले मेरो केवल परीक्षाफल हेरे होलान्, पढेनन् । पढे होलान् तर बुझेनन् । बुझे होलान् कि ? तर भनेनन् ।
‘ए पड्के, सेकेन्ड त भएछस् त,’ नरेश काकाले रहस्य खोलिदिए ।
खासमा मैले निर्णय गरेको थिएँ, म बीसको नोट पाउने लायक छु । म दोधारमा थिइनँ । दोधारमा थिएँ भने, म बाबाको छेउ जान सक्ने थिइनँ । मलाई लाग्यो, पक्कै हो, म बीसको नोटको हकदार छु ।
तर, मेरो ढाँडमा बाँसको भाटा बज्यो । नरेश काकाले रहस्य खोल्नासाथ बाबाको आँखा रात्तियो । कतिखेर उनको हातमा बाँसको भाटा आयो, मलाई थाहा छैन ।
‘साला जाँ... फस्ट पो होला भनेको त...,’ बाबाको वाक्य आधा हुँदा बज्रिएको भाटाले मेरो ढाड नीलो भइसकेको त थियो नै, सहन नसकेर म बुरुकबुरुक गरिरहेको पनि थिएँ । मेरो कलिलो ढाँडमा भाटा बजेपछि म अरर भएको थिएँ । आँखाबाट तुरुक्क आँसु खसेको थियो । छटपट्टिएको थिएँ । सास बन्द होलाजस्तो भएको थियो । अनि म आँगन थर्काएर रोएको थिएँ ।
तर, बाबाले अर्कोपल्ट हान्न भ्याएनन् । कसोकसो मैले बाबाको हातबाट पाखुरा खुस्काएँ । र भागें, उकालै उकालो । उकालै उकालो ।
म त्यतिको स्पिड कहिल्यै कुदेको थिइनँ ।
निकैमाथि पुगेर पहिले ढाडमा हात पुगुन्जेल मुसारें अनि तल आँगन हेरें । बाबा भाटा बोकेर मतिर हेरेर बर्बराइरहेका थिए ।
म रालसिङान भएको थिएँ । मन कटक्क दुखेर आयो । मेरो पेन्सिल चोर्ने दिलीपसित म कहिल्यै त्यसरी रिसाइनँ, जति बाबासित रिसाएकोथिएँ । मेरो चप्पलको तुना बिलेटले काटिदिने धनबहादुरसित पनि म त्यतिको रिसाइनँ, जतिको बाबासित रिसाएको थिएँ ।
मैले मञ्जुको ज्योमेट्री बक्सबाट सन्देश मिठाई चोर्दा, मञ्जु पनि मसित त्यति रिसाएको थिइनँ, जति म बाबासित रिसाएको थिएँ ।
मलाई लागेको थियो, त्यो बीसको नोटबाट तीनवटा सन्देश मिठाई किन्छु । उब्रेको पैसा स्कुल लाग्दा खर्च गर्छु । त्यो सन्देश मिठाई बोकेर म मञ्जुको घर जान्छु । त्यसलाई त्यसको घरमाथिको बारीको डिलबाट बोलाउँछु र लुकाएर त्यसको हातमा सन्देश मिठाई राखिदिन्छु र सरासर घर फर्किन्छु ।
त्यो त हेरेको हेरेकै हुने थियो । वाल्लै पर्ने थियो । किनभने जीवनमा मैले पहिलोपल्ट त्यसलाई सन्देश मिठाई दिएको हुने थिएँ । मैले मेरै पैसाले किनिदिएको हुने थिएँ । त्यसपछि हिसाब बराबर हुने थियो ।
ज्यू, हिसाब बराबर हुनेथियो ।
किनभने जहिल्यै मैले त्यसको ज्योमेट्री बक्सबाट त्यसको सन्देश मिठाई चोरेको छु । मैले चोरेको त्यसले थाहा पाएर पनि थाहा पाउँदिन थिई ।
‘किन चोरिस् ?’ मात्रै भन्थी ।
‘खान मन लागेर,’ भन्थें ।
‘आफू चैं कैले किन्दैन,’ भन्थी ।
‘अन्त, मसित पैसा त छैन,’ भन्थें ।
त्यसपछि त्यो बोल्दैन थिई ।
र भोलिपल्ट पनि ज्योमेट्री बक्समा सन्देश नै बोकेर आउँथी । किन त्यसो गर्थी त्यो ? त्यसलाई थाहा छैन र म चोर हुँ भनेर ?
अनि फेरि पनि चोर्थें । त्यसले थाहा पाएर पनि पाउँदिन थिई । त्यसरी त्यसले मलाई सधैं जितेकी थिई, म सधैं हारेको थिएँ । तर, यसपल्ट मैले जित्ने थिएँ, त्यो हार्ने थिई ।
तर, मेरो हिसाब बराबर हुन नै पाएन । त्यसपछि मेरो मन बिग्रिएर आयो । म मञ्जुलाई सम्झेर एकपल्ट फेरि रोएँ । भुइँमा थचक्क बसें । भेटेजति ढुंगा टिपें । र, तल बाबाहरू भएतिर अन्धधुन्ध हान्न थालें ।
बाबाहरू त भारेभाग भए । मैले निकै बेर ढुंगा सोहोर्दै त्यसरी नै हानी बसें । अनि लागें दिलीपको घरतिर । उकालै उकालो, उकालै उकालो ।
म हप्ता दिन दिलीपकै घरमा लुकेर बसें ।
म दिलीपसित घरपछाडि डिबगोली खोलिरहेको थिएँ । खेलको धुनमा मैले आफू लुकिरहेको बिर्सिएँ । तर, कसैले मेरो कन्सिरी च्याप्प समाते ।
हेरें, बाबा थिए ।
त्यसपछि मैले अस्ति हानेको ढुंगा सम्झिएँ । आफ्नो दोष सम्झिएँ र सुरु भयो मेरो रोइकराइ । म रोएँ किनभने बलियो बाबालाई मैले जित्नै सकिनँ । मलाई बाबालाई जित्न नसकेकोमा अत्यधिक पीडा हुन्थ्यो । बाबा मेरा लागि अमरिस पुरी थिए । भिलेन । मेरो बाबा मेरा दुश्मन थिए ।
बाबाले कन्सिरीबाट औंला हटाए । बलियो गरी पाखुरामा समाते र तानेर घर पुर्‍याए ।
आमा आँगनमा केश अघिल्तिर पारेर बाटिरहेकी थिइन् ।
‘कहाँ थेछ यो,’ आमाले बाबालाई सोधिन् । बाबा तर एक शब्द बोलेनन् ।
आमा मतिर फर्किएर कराइन्, ‘बाबालाई त्यसरी ढुंगा हान्नुहुन्छ त ?’
मैले मुख फर्काएँ, ‘मलाई किन कुटेको त ?’
‘फस्ट हुनु भनेको किन सेकेन्ड भइस् त ?’ आमाले भनिन् ।
‘तर आमा क्लासमा म एक्लो सेकेन्डमा पास भएको हुँ, अरू त सप्पै फेल भए । फसैको बराबर पास भएको थिएँ म ।’ भन्दा मेरो आवाज हिक्क गरेर अड्किएको थियो ।
क्लासभरि म एक्लो पास भएको थिएँ, त्यो पनि सेकेन्डमा । सबै फेल भएको क्लासमा, म एक्लै पास हुनु, त्यो पनि सेकेन्डमा, फसै हुनु बराबर त थियो नि होइन र ?
हो, त्यसै कारण नै लागेको थियो, बीसको नोटको हकदार मै हुँ । हो म पटक्कै दोधारमा थिइनँ ।
चुपचाप सुनिसकेका बाबाले त्यही बीसको नोट निकाले र भने, ‘ला मिठाई खा ।’
मैले नोट पक्रिएँ । बाबाको अनुहार हेरें । अनि बाबाको अनुहारतिर नोट फ्याँकिदिएँ । अनि चुपचाप घरभित्र पसें । त्यतिखेर मेरो ओठमा पनि मुस्कान थियो, बाबाको ओठमा पनि ।
त्यस्तो थियो, त्यो दोस्ती ।
प्रकाशित : माघ १२, २०७५ १०:०४